Shiinaha Goynta Mat for Silhouette, 8824, 12 ″ x24 ″ gogosha goynta silhouette soosaarka Warshad iyo Warshad | Allwin
Goynta Mat for Silhouette, 8824, 12 ″ x24 ″ gogosha gogo 'for silhouette cameo
Si fiican ugu shaqee Silhouette Cameo4 / 3/2/1 1 aaladda DIY ee mashiinka qalabka goynta elektarooniga ah.
Gogosha adag ee gogosha goynta dhejiska ah ayaa loo habeeyay maadada miisaanka fudud, maadada lagu taliyay ee kaararka qaro weyn, kaararka dhalaalaya, qalabka magnetka, boodhka boodhka leh, maro adag oo adag.
Gogosha goynta beddelka waxaa laga sameeyaa PVC tayo sare leh, Gogosha gogosha gogosha leh ee dhejiska leh 12 * 24 (inch)
Ku xafid daboolka filimka dusha sare dusha sare ee silhouette sawir goynta ah marka aad kaydineyso si aad uga dhigto goynta dhejiska dhejiska ka madax bannaan duugga iyo boodhka. U adeegso xoqista si aad u xoqdo qaybo badan iyo spatula si aad si taxaddar leh uga saarto sawirrada la gooyey.
Mats-yadaani waxay leeyihiin heerka saxda ah ee xajinta si ay qalabkaaga si adag ugu hayaan inta lagu jiro waxayna u oggolaaneysaa in si fudud alaabta looga qaado. Gogosha goynta waxay ku fiican yihiin farshaxanleyaasha, musqulaha, ardayda farshaxanka iyo hiwaayadleyda inay sameeyaan inta badan Mashaariicda DIY.
Lambarka Moodalka Shayga 8824
Cabirka Wax soo saarka 325x640 mm
Ku habboon Mashiinka Sawir gacmeedka 4 / 3/2/1